Fankalazana fahatsiarovana ny faha-11 taonan'ny EBI
Natao tao amin'ny hotely Nanchang Boli ny fankalazana anay. Ary nanasa ny mpamatsy rehetra tsara indrindra ho an'ny kapoaka alimina ao Shina izahay handray anjara amin'ny fetinay. F ...
Hetsika lehibe amin'ny volana aprily
Tena volana manokana i April. Tapitra ny fe-potoana "March Expro". Ny ekipanay dia mbola miroboka amin'ny hafaliana amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny fampisehoana mialoha. Tonga tamim-pahanginana ny tsingerintaona faha-11 an'ny EBI, ary tonga ny fankalazana. Ny roa andro farany sisa amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy. Re ...
2021, fanombohana vaovao!
2020, Nandeha haingana be! Areti-mandringana tampoka, fandalinana tsy miasa, asa sy fiainana …… Toa voafintina ny fotoana, tsy mbola nahafinaritra, ary ho maika hanao veloma isika! Veloma amin'ny 2020 amin'ny 2020, manatrika ny rivotra isika! Niezaka mafy izahay! Manana vokatra tsara isika! -Sales ...
Tongasoa eto amin'ny antoko EBI！ Hankalaza ny Noely! Ny hetsika Krismasy fankalazana dia karazana fomban-drazana ao amin'ny EBI. Tianay daholo ity festival ity. Noely faha-11 niara-nankalazantsika io. Tianay ny mizara aminao. Ny hazo krismasy dia tena tsara tarehy, feno hazo ny mpiasa & ...
Ohatrinona ny varotrao amin'ity taona ity? - Nahazo RMB 100 tapitrisa isika.
Amin'ny 3 Desambra 2020 izay fotoana manan-tantara ho an'ny EBI! Amin'ity andro ity, nihoatra ny tokonam-bolan'ny 100 tapitrisa RMB ny zava-bitantsika !! Miasa mafy ny mpiara-miasa EBI !! Eo ambanin'ny fiantraikan'ny valanaretina, manitsy avy hatrany ny làlana izahay, manova ny paikady ， Ary amin'izany pu ...
Ahoana no lazain'ny mpanjifanay?
Ahoana no lazain'ny mpanjifanay? Tato ho ato dia nahazo taratasy fiderana maromaro avy amin'ny mpanjifantsika izahay manoloana ny fanampiana tsara azon'izy ireo avy amin'ny EBI. Voninahitra lehibe ho anay ny manompo ny mpanjifanay rehetra. Tianay hizara aminao ny atin'ny taratasinao, azafady mba vakio eto ambany ny taratasy. Iray amin'ireo fanaonay mahazatra ...
Mankalaza ny tsingerintaona nidiran'ny mpiasa
Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2010, ny EBI dia nahavita zava-bita mahatalanjona tao anatin'ny 10 taona lasa teo ambany fitarihan'ny talen'ny tale jeneraly sy ny mpitantana hafa ary ny ezaky ny mpiara-miasa hafa. Mba hampisehoana ny fankasitrahantsika an'ireo namantsika tamin'ny asa mafy nataony sy hahatsiarovanay ny fotoana ananantsika ...
Afaka manampy amin'ny famolavolana ny sary ve ianao? - ENY, Manolotra mihoatra ny fonosana izahay
Ekipa mpamorona teknika EBI manangana hatramin'ny 9th 2010. Nanampy mpanjifa an-jatony maro izahay hamolavola ny sary famantarana sy ny endrik'izy ireo. Mombamomba ny ekipa teknika: mpikambana ao amin'ny ekipa: ekipa matihanina dia ho mpanohana matanjaka amin'ny orinasanao. Seho: ny endrika sy ny bobongolo izay nataontsika teo aloha. Ahoana ny fomba hahazoana ny ...
Amin'ny volana septambra amin'ny firehetam-po dia azo antoka fa handresy isika
Fetiben'ny fividianana septambra dia festival izay tsy azon'ireo mpivarotra vola vahiny atao ary tsy ho eo ny EBI. Tao amin'ny Lushan tsara tarehy, EBI dia nandefa ny fividianana Festival tamin'ny volana septambra ary ny fivoriana fanombohana PK. Misafidy ny hanana hetsika fanitarana mahafinaritra izahay mba hanitarana ny rehetra ...
Kolontsaina amin'ny fanomezana torolàlana ao amin'ny EBI - Manainga ny ekipantsika toy izao izahay
Ny rafitry ny mpampianatra dia manana tantara lava ao Shina. Tranga iray izay itarihan'ny mpampianatra ny mpianatra hianatra, hiasa ary hiaina mba hahafahan'ny mpianatra miditra tsara sy haingana kokoa amin'ny asany. Matetika, ny rafi-pampianarana nentin-drazana sinoa dia mizara roa hevitra: ny voalohany dia ny tompony ...
Ahoana ny fampiasana marina ny mpanadio tanana?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-03-27
Amin'ireo andro izay manjaka ny viriosy dia lasa zava-dehibe indrindra ny fampiasana ireo mpanadio tànana miady amin'ny bakteria. Tsy ilaina ny manasa rano, izay mamonjy fotoana ho an'ny tsirairay ary mahatratra ny vokatry ny fanaingoana. Saingy ny fomba diso amin'ny fampiasana vahaolana fanadiovana tsy misy tanana dia tsy afaka manala fahasimbana ...
Tamin'ny 24 Febroary 2020, taorian'ny iray volana nitokanana iray volana mahery, dia tonga soa aman-tsara tao amin'ny orinasa ny mpiasa rehetra ao amin'ny EBI. Rehefa niverina niasa izahay dia nanomana hetsika manokana roa ho an'ny rehetra ny orinasa, ny fizarana sakafo no voalohany. Ny mpiasan'ny EBI rehetra dia mitondra ny sakafony tiany zaraina amin'ny rehetra. Taorian'ny e ...